Noforonina On Desambra 20, 2019
3. Boky an'ny mpampiasa
Ny Easy Multi Display User Guide V2
Namorona kinova roa an'ny mpitari-dalana anay izahay mba hanamorana ny fampiasana Easy Multi Display. raha aleonao miditra amin'ny Torolàlana ho an'ny mpampiasa ivelan'ny tranonkala, aza misalasala misintona ny Torolàlana ho an'ny mpampiasa Multi Multi Display V2 Eto:
Fa maninona aho no tokony hisintona an'ity torolàlana ho an'ny mpampiasa ity?
Misy antony marobe amin'izany! Voalohany, tsy torolàlana ho an'ny mpampiasa tsotra izy io, mihoatra noho izany, ho hitanao ireo loharano maro izay hanampy anao hampiasa betsaka ny rindrambaiko Easy Multi Display. Faharoa, raha ampidininao izao dia azonao ampiasaina amin'ny fotoana rehetra fa tsy mila misintona azy intsony. Ary farany, hahazo fidirana amin'ny pejy 75 ianao, ao anatin'izany ny fanampiana amin'ny fametrahana, ireo lahatsoratra FAQ anay, fampianarana vitsivitsy hanampiana anao hampiasa ny rindrambaiko mivantana amin'ity rakitra ity!
Lisitry ny atiny EMD
Lisitry ny atiny EMD 2
VERO Studio dia mamorona ala mikitroka ho an'i C4's Lucy, ilay chimp olombelona
Ny efijery LED "mm lehibe indrindra "China dia mampiseho sary" 5D "24K
Ny efijery LED nohavaozina mba hanazavana ny kianja St. Petersburg